२०२२ मा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सम्भावना देखिएन | Ratopati
२०२२ मा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सम्भावना देखिएन
तामाकोशी, मेलम्ची, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यो वर्ष सक्ने भनेका थियौं तर नहुने देखियो : योजना आयोगका उपाध्यक्ष
personएलिजा उप्रेती exploreकाठमाडौं access_timeबैशाख १८, २०७७ chat_bubble_outline0
कोरोनाका कारण देश लकडाउनमा छ । आर्थिक गतिविधि शुन्यप्राय छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोनाको कारणअर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई लिएर अध्ययन गरिरहेको छ । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउने तयारीमा छ । यसको लागि अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माण गरिरहेको छ । योजना आयोग पनि बजेट छलफलमै व्यस्त छ । कोरोनाले अर्थतन्त्र प्रभावित भएपछि अबको बजेट कस्तो आउँला, अर्थतन्त्र पुनर्उत्थान गर्न के के प्याकेज ल्याउँला भन्ने पनि छ । लकडाउनले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र अवको बजेट विषयमा केन्द्रीत रहेर योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कंडेलसँग रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानीको अंश
कार्यक्रम सबै ठीक छ तर कार्यान्वयनमै यस्तो समस्या देखिएको छ । यो योजनाको लक्ष्यअनुसार जान समस्या होला कि भन्ने देखिएको छ । कोभिड–१९ को प्रतिकूल असर हामीकहाँ मात्र होइन, संसारभर नै परेको स्थिति हो ।
लकडाउनको अवधिमा मुल परियोजनाहरुलाई कामदारलाई आफ्नो घेराभित्र राखेर काम अगाडि बढाउनु भनेको छौ । ती परियोजना बनिरहेका छन् तर जसरी काम हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन भन्ने हामीले महसुस गरेका छौं
राष्ट्रिय गौरव लगायतका पूर्वाधार योजना केही ( तामाकोशी, मेलम्ची, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल) यो वर्ष सकाउने भनेका थियौं । केही काम अगाडी बढाउनुपर्ने थियो । फास्ट ट्रयाकलाई छिटो लिएर जाने भन्ने थियो त्यो पनि कमजोर भयो । तर पनि लकडाउनको अवधिमा मुल परियोजनाहरुलाई कामदारलाई आफ्नो घेराभित्र राखेर काम अगाडि बढाउनु भनेका छौं । ती परियोजना बनिरहेका छन् तर जसरी काम हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन भन्ने हामीले महसुस गरेका छौं ।
लकडाउन नभएको भए सोचे अनुरुप नै आर्थिक बृद्धि हुन्थ्यो त?
लकडाउन नभएको भए आर्थिक बृद्धिदर साढे ८ प्रतिशत हुन्थ्यो वा हुदैनथ्यो, त्यो म भन्न सक्दिनँ । अर्थतन्त्रको गति सुस्त भएकाले कम नै होला भन्ने चाहिँ थियो तर निराशाजनक अवस्था थिएन ।
सन २०२२ सम्म अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा जाने र २०३० अगावै मध्यम आय भएको देशमा जाने नेपालको लक्ष्य थियो,अब यो लक्ष्य पूरा होला?
विकासोन्मुख देशमा जाने मानव विकास सुचकांक, आर्थिक जोखिम सुचकांक र प्रतिव्यक्ति आम्दानीको सीमा छ । त्यसका लागि आवश्यक दुईवटा मापदण्ड पुगेको थियो, एउटा प्रतिव्यक्ति आम्दानी पुगेको थिएन । सामाजिक संकुचनमा पनि केही समस्या हुने, खासगरी गरिबी बढ्ने हो कि भन्ने हामीलाई डर लागिरहेको छ । आम्दानी पनि त्यो अनुसार नबढ्ने भएकाले केही समस्या पार्छ कि भन्ने छ । तर पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय पनि अहिले हामी भन्न सक्दैनौं । अध्ययन पछि मात्र भन्न सक्छौ ।
कोरोनाले निम्त्याएको चुनौती र अबको सुधारको पाटो के–के होलान् ?
समय—समयमा आउने विभिन्न अवरोधले अर्थतन्त्रको मोडलमा नै असर पर्ने गरेको छ । अहिले विश्वमा नै कोरोनाले असर पारेको छ । अब हामीले हाम्रो शिक्षा पद्धतिमा नै परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । अहिलेसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, नीजि क्षेत्रलाई छोडदा हुन्छ भन्ने सोचाइ थियो । त्यसमा अब पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखियो । यस्तै अब स्वास्थ्यमा धेरै नै खर्च गर्नुपर्छ । शिक्षामा धेरै मानिस जम्मा भएर पढ्ने पद्दति रहेको थियो । अब त्यो परिवर्तन गरेर डिजिटलमा जानुपर्छ । हामी विप्रेषणमा भर परेका थियौं । हामीले धेरै मानिस बाहिर पठायौ । अब यो परिवर्तन हुनुपर्छ । अब देशहरु धेरै अन्तरमुखी हुनु नहुने देखियो ।
समयमा आउने विभिन्न अवरोधले अर्थतन्त्रको मोडलमा नै असर पर्ने गरेको छ । अहिले विश्वमा नै कोरोनाले असर पारेको छ । अब हामीले हाम्रो शिक्षा पद्धतिमा नै परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । अहिलेसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, नीजि क्षेत्रलाई छोडदा हुन्छ भन्ने सोचाइ थियो । त्यसमा अब पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखियो ।
युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै कसरी नयाँ रोजगारी दिन सकिन्छ भनेर सोच्ने बेला भएको छ । वर्षमा ५ लाखको हाराहारीमा मानिस श्रम बजारमा आउने र उनीहरु विदेश जाने गरेकाले राज्यलाई खासै चिन्ता थिएन । अब बढी नै चिन्ता गर्नुपर्ने, राज्यले बढी नै अभिभावको भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । सिस्टम बलियो बनाएर राज्यले धेरै क्षेत्रमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ ।
हामीले आगामी दिनमा कसरी अघि बढने भनेर दीर्घकालीन सोचसहितको २५ वर्षीय योजना पनि बनाएका छौं । त्यसले हाम्रो आगामी बाटो तय गर्ने छ । कोरोना अध्ययनपछि त्यसले कहाँ कहाँ कसरी काम गरेको छ भनेर अन्य देशले के भन्छन् त्यसलाई समेत ख्याल गरेर अघि बढ्ने छौं । हाम्रो देशको अर्थतन्त्र सानो भएकाले भारत, चीनले के गर्छन् त्यो हेर्न आवश्यक छ ।
हामीले पहिला भौतिक पूर्वाधारलाई बढी जोड दिएका थियौं । अब सामाजिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षामा बढी जोड दिनुपर्ने भयो । हाम्रो खर्च बढ्ने देखियो । आयको स्रोत संकुचन हुँदै जाने, आन्तरिक आय पनि कमजोर हुँदै जाने, विदेशबाट आउने रकम पनि रोकिने, वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण पनि कमजोर हुने हो कि भन्ने पनि देखिएको छ । फण्डिङ कमजोर हुने तर खर्च बढ्दै जाने देखिएको छ । हामीले हजारौं परियोजना सुरु गरेका छौं । प्रोजेक्ट बैंकमा नै ६ हजार ४ सय ६० वटा परियोजना दर्ता भएका छन् । स्थानीय, प्रदेशमा परियोजना छन् । स्थानीय तहमा कति दर्ता भएका पनि होलान् । हामीले दर्ताको लागि आव्हान गरेका छौं । नयाँ परियोजना धेरै माग भएका छन् । आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने परियोजनालाई पनि सँगै लैजानु पर्ने बाध्यता छ । हामी सामाजिक क्षेत्रमा जान आवश्यक छ । खर्चको माग बढी देखिएको छ । त्यो अनुसार स्रोत निकै कम रहेको छ । यो अवस्थामा हामी छौं । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु सरकारका सामु यतिखेरको मुल चुनौती हो ।
प्रशासनकै कारण मकवानपुरमा कोरोना जोखिम बढ्दो
ताराको गीतमा अमित र क्रीन्चाको रोमान्स
काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र ३९ हजार बढी सक्रिय संक्रमित
भ्रममा नपरौं, बादललाई भोट हाल्ने सहमति भएको छैन : माधव नेपाल